Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay January 15, 2021 Waxaa qoray Xarunta Caafimaadka ee Harley Street
Talaalka gaarka loo leeyahay ee Oxford waxaa sidoo kale ansixiyay maamulayaasha UK waxaana la filayaa in talaalada gaarka loo leeyahay ee tan sidoo kale si dhakhso leh loo heli doono dhawaan.
Waa sidee Pfizer Coronavirus Covid 19 Tallaal ayaa la siiyaa?
Irbad ahaan gacanta kore.
Ayaa qaadi kara Coronavirus Covid 19 tallaal?
Tallaalka Covid-19 waa u diyaar dadka oo dhan.
Sideen ku heli karaa tallaalka Coronavirus?
Please download and use the contact form to register your interest in the Pfizer Vaccine. Once the vaccine is released, dhakhtarkaaga Harley Street ayaa ka faa'iideysan doona fursad uu ku tallaalo markii aad qalliinka u soo gasho sababo guud awgood, ama tallaalkaaga ifilada sanadlaha ah.
Waxaad ku heli kartaa isla waqtiga tallaalka hargabka haddii aad rabto.
Haddii aad ka walwalsan tahay inaad waayi doontid tallaalka Coronavirus, la xiriir adiga Xarunta Caafimaadka ee Harley Street si loo ballamo ballan si loo qaato tallaalka.
Ma jiri doonaan waxyeellooyin kale tallaalka Coronavirus Gaar loo leeyahay?
Waa wax caadi ah in casaanka iyo raaxada la helo goobta tallaalka, iyo waliba madax xanuun, laakiin saameyntani waa inaysan soconin wax ka badan maalmo. U tag GP-gaaga haddii aad leedahay waxyeellooyinka dawooyinka oo sii dheeraanaya dhawr maalmood, ama haddii aad isku aragto finan ka dib markii aad qaadatay Tallaalka gaarka loo leeyahay ee 'Pfizer Coronavirus Vaccine Private'.
Ma u heli karaa talaalka Covid19 si gaar ah?
Tallaalka 'Pfizer Covid019 Coronavirus jab' ayaa loo heli karaa si gaar ah, laakiin waa qaali isla markaana aad u yar. Filo inaad bixiso inta u dhaxaysa £ 1000 iyo £ 2000.
Waxaan kaala talin karnaa inay amaan kuu tahay inaad haysato iyo in kale, laakiin waa inaad soo booqataa rugta caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si aad u diyaariso.
Fadlan dhagsii xiriirka hoose si aad u buuxiso foomka si aad u muujiso xiisahaaga.